Qarax Xoogan oo Caawa Ka Dhacay Magaalada Ankara ee Dalka Turkiga (VIDEO)+Sawiro | Maalmahanews
Qarax Xoogan oo Caawa Ka Dhacay Magaalada Ankara ee Dalka Turkiga (VIDEO)+Sawiro
March 14, 2016 - Written by admin
London(Maalmaha):– Qarax aad u xoogan oo caawa ka dhacay dalka Turkiga ayaa waxaa ugu yaraan ku geeriyooday 28 qof, gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa ku qarxay caasimadda waddanka Turkiga ee Ankara, iyadoo in ka badan 60 qof oo kalana ay ku dhaawacmeen qaraxaasi.
Saraakiisha ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli basas ay leeyihiin milateriga dalkaasi ay istaageen samaafaraha ama nalka taraafikada meel u dhaw baarlamanka iyo xarunta dhexe ee milateriga dalkaasi.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo baajiyay safar uu ku tegi lahaa dibadda ayaa waxa uu wacad ku maray in uu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray fulayada qaada weerrarada noocan oo kale ah iyo cidda ka dambeysaba.
Dowladda Turkiga ayaa waxa ay durbadiiba farta ku fiiqday kooxda la mamnuucay ee dhaqdhaqaaqa gooni u goosadka Kurdiyiinta ee PKK.
Xoghayaha Guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in xulafada NATO ay ka garab taagan yihiin Turkiga dagaalka ay kula jirto argagixisada.
Ciidammada Turkiga ayaa dhawaan waxa ay xoojiyeen weerrarada ay ku hayaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee Suuriya, kuwaasi oo ay Turkidu leedahay waxa ay ku xiran yihiin ururka PKK.